Shiinaha Soosaarayaasha Triaryl Isopropylated Phosphate iyo alaab-qeybiyeyaasha. Nasiib
Feefateerka Triaryl Isopropylated
Triaryl Isopropylated Phosphate, IPPP35 waa dareere hufan oo leh ur yar oo udgoon, nafwaayay 78-85 (20 ° C), dhibic flash 220 ° C, dhibic karkaraya 235-255 ° C (4 mmHg), index Refractive index 1.553-1.556 (25 ° C), ku milma benzene, aalkolo, fasal ether ah.
Waa balaastig olol celiya oo leh xasilloonida hydrolytic aad u fiican, saliid aad u fiican iyo dahaarka korantada, iska caabbinta duugga ah iyo astaamaha bakteeriyada. Waxaa badanaa loo isticmaalaa PVC, polyetylen, maqaar macmal ah, filim, iyo xaashi. , xaashida, suunka wax lagu raro, qalabka sagxadda, siligga iyo fiilada, iyo cusbi dardaro ah, caag iyo bacrimiye cellulose ah, olol celiyaha; sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay wakiilka kontaroolka shidalka shidaalka, saliidaynta saliidda cadaadiska xad dhaafka ah ee wakiilka kahortaga iyo waxyaabaha la isku daro ee ololka celiyaha ah
Muuqaal: dareere aan daah lahayn ama midab huruud ah lahayn
Culeyska gaarka ah (20 ° C): 1.183
Waxyaalaha fosfooraska (P%): 8.6
Qiimaha asiidhka (mgKOH / g): 0.1
Triaryl Isopropylated Phosphate waxaa lagula talinayaa inuu noqdo olol ololka PVC, polyetylen, leatheroid, filim, fiilo, silig koronto, polyurethanes jilicsan, resins cellulosic, iyo caag synthetic ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii gargaar wax qabadsi olol u ah mashiinnada injineernimada, sida wax laga beddelay PPO, polycarbonate iyo polycarbonate isku dar. Waxay leedahay waxqabad wanaagsan oo ku saabsan caabbinta saliidda, go'doominta korantada, iyo caabbinta fungus.
Maadadan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa badeecadahan soo socda: saliidaha iyo dufanka, waxsoosaarka dahaadhka, polymerka, dhejiska iyo dahaadhka, dawooyinka sawirka kiimikada iyo dareerayaasha hidaha. Maadadan waxaa lagu sii deyn karaa deegaanka iyadoo loo adeegsanayo isticmaalka warshadaha: caanaha isku dhafka ah, qaaciddada maadada, iyo qaaciidada soosaarka maqaalka
Fayfetiga 'Triaryl Isopropylated Phosphate' waxaa laga soo saaray oo / ama laga keenay Aagga Dhaqaalaha Yurub sanadkiiba 1 000 - 10 000 tan.
Maadadan waxaa isticmaala macaamiisha, qodobbada, shaqaale xirfadlayaal ah (adeegsiyo baahsan), sameynta ama dib-u-xirxirida, goobaha warshadaha, iyo wax soo saar.
Bixinta la-tashiga sicirka fosfaylka ah ee loo yaqaan 'triaryl isopropylated phosphate', Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, oo ka mid ah kuwa aadka u fiican ee soo saarayaasha istiraatiijiga ah ee 'isopropylated phosphate' ee Shiinaha, ayaa kaa sugaya inaad iibsato bulk ippp 65, reofos 65 oo ay ka sameysato warshaddeeda.
1．Sonyonyms: IPPP, Triaryl phosphates Iospropylated, Kronitex 100, Reofos 65, Triaryl phosphates2. Miisaanka Molecular: 3903. CAS MAYA .: 68937-41-74．Qaaciddada: C18H15 R3O4P5．Qeexitaanno: Muuqaal: dareere aan midab lahayn ama huruud khafiif ah culeys gaar ah (20/20 ℃): 1.15-1.19Acid Value (mgKOH / g): 0.2 max Index Color (APHA Pt-Co): 80 max Index Refractive: 1.550- 1.556Viscosity @ 25 ℃, cps: 64-75Phosphorus Mawduuca%: 8.0min6. Xidhmada: 230kg / shabaqa birta birta ah ， 1150KG / IB QAADASHADA, 20-23MTS / ISOTANK. Badeecadani waa xamuul khatar ah: UN3082, FASALKA 9
Bixinta la tashiga qiimaha saddexda ah ee loo yaqaan 'isopropylated phosphate', Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, oo ka mid ah kuwa aadka u fiican soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha saddex-geesoodka ah ee Shiinaha, ayaa kaa sugaya inaad soo iibsato tiro badan oo ah 'triaryl isopropylated phosphate form' oo ay sameyso warshadeeda.